Ka soo kabashada xogta laga badiyay ama la tirtiro ka iPhone ma aha wax aan macquul aheyn; Ilaa hadda waxa ka soo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya barnaamij wanaagsan si si aad u bilowdo, iyo helitaanka mid ka mid ma aha wax adag. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in marka ay tirtirto file ah oo ka iPhone, waxaa dhammaatay wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, aan kiiska. Xogta ayaa weli ku wadid aad iPhone / iPad / iPod Touch ee adag ilaa uu overwritten by Xog cusub oo ay meel. Sidaa darteed, barnaamij soo kabashada ah waa wax ku ool ah inta ay sameeyay sida ugu dhaqsaha badan ka dib markii tirtirka. Doorashada ku software kabashada xogta iPhone ugu fiican noqon kartaa wax adag, inta badan, sababtoo ah tirada sheer barnaamijyada soo kabashada iPhone xogta waa mid aad u sarreeya. Kuwaas oo isugu jira freeware fudud in barnaamijyada casri ah, mushaarka badan, doorashada iPhone software saxda ah soo kabashada waa doorasho adag. Si kastaba ha ahaatee, halkan waa 3 ka mid ah qalabka soo kabashada xogta iPhone ugu fiican in aad kala dooran karto:
Top 3: Forensices ogsijiin u iPhone
Top 2: iRecovery ul
U baadha ayaa ogsijiin u iPhone waa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada xogta iPhone hadda la heli karo. Ma aha oo kaliya waxa ay awood u kabsaday xogta ka iPhone, laakiin waxaa barnaamijka sidoo kale bixisaa macluumaad 'foreensiga' ballaaran oo ku saabsan iDevice, laga bilaabo xiriir web xiriir stats, iwm version A maxkamad barnaamijka waxaa laga heli karaa sidoo kale.
- Waxa uu ku siinayaa aragti dhameystiran in aad telefoonka
- Ladnaansho xogta si fudud
- muujiyaa warbixin hab aad u sahlay.
1. Falanqayntan oo faahfaahsan iyo stats
2. Waxa kale oo lagu dhiso karaa xogta ku kharribeen
1. Interface ma aha sida fudud
2. Dad badan oo macluumaad aan micno lahayn
3. Ma u fiican shaqsi ah loo isticmaalo
4. Qaali ($ 1299)
iRecovery ul yahay asal ahaan drive ah USB flash Timid barnaamij software ka mid ahaa. Waa mid aad u awood iPhone software soo kabashada, sida ay si fudud u iskaan karaa waxyaabaha aad iPhone / iPad ka dibna download ku jira kuwa si aad u computer. Waxa kale oo aad soo kaban karto xogta tirtiray ka iPhone in arrin daqiiqo. Barnaamijka ayaa qoreysa ah sahlan quruxsan in ay isticmaalaan interface, si awoodiisa farsamo looma baahna in si aad u hesho si fiican u shaqeeya. Waxa kale oo awood u leh soo saarida files gurmad ka your computer. Halkan waxa ku jira qaababka ugu wanaagsan;
- Easy in ay isticmaalaan interface.
- All ka mid xal u ah iDevice.
- Falanqeynta tirtiray files ka hor soo kabashada, jidaynayey isticmaala in ay doortaan waxa ay doonayaan inay ka soo kabsadaan.
1. Macluumaadka si wax ku ool kabanayso
1. Waxaa loo baahan USB ah drive oo dheeraad ah (taas oo aan micno lahayn)
2. Xoogaa qaali A ($ 169.99)
Wondershare Ayaa Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waa software kabashada iPhone u fiican oo bixiya shaqeynta mid aad u macquul ah si loo isticmaala macruufka. Waxaad Macdan karaa hayaan ka Lugood isticmaalaya barnaamijka, halka kabsaday xogta tirtiray ka iDevice ma noqon karaan kuwo si fudud wax; kaliya xiro qalabka aad, ordo barnaamijka oo ha sameeyo ay shaqo.
- Saddex hab kabashada: Macdan gurmad Lugood, Macdan gurmad iCloud oo si toos ah u soo kabsado iDevices
- Data la previewed karaa ka hor soo kabashada
- Program soo qaadan oo aan wax badan oo khayraadka kombiyuutarka.
1. Xogta soo kabanayo si buuxda
2. Interface aad u fudud
3. La jaan qaada tiro balaadhan oo ah qalabka
4. Tiro badan oo qaabab waxaa taageera
> Resource > iPhone > 3 Best iPhone Data Recovery Software 2015